Boob iyo biliqo baahsan oo ka bilowday xafiisyadii Shabaab ee Kismaanyo. – Radio Daljir
Seteembar 29, 2012 2:16 b 0
Kismaanyo Sep 29-Wararka ka imaanaya magaalada Kismaanyo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose halkaasoo shalay ka baxday gacanta kooxda Al-shabaab xiligana aysan jirin cid gacanta ku haysa amaankeeda, ayaa sheegaya in dad shacab ahi boob xoogan u geysteen xafiisyadii kala duwanaa ee maamulka Al-shabaab ku lahaa magaaladaasi.
Goobaha dadka shacabka ahi biliqaysteen waxaa kamid ah xarunta degmada, saldhigyada Bilayska, xaruntii Maxkamada Shabaab, iyo meelo kale oo ay ku shaqayn jireen masuuliyiinta kala duwan ee ururka Al-shabaab u fadhiyey magaalada Kismaanyo.
“Dad shacan ah ayaa biliqaystay xafiisyadii Al-shabaab ee magaalada, goobaha la boobay waxaa kamid ah Saldhiga, iyo xarunta degmada, waxyaabaha dadku halkaas ka qaateen waxaa kamid ah Kuraas iyo warqado ay Shabaabku kaga tageen xafiisyada” sidaasi waxaa yiri goob jooge la hadlay Radio Daljir.
Kismaanyo waa magaalo xeebeed muhiimad weyn ugu fadhidey kooxda Al-shaab, halkaasoo ay ka talinayeen mudo 3 sanadood ah, waxayna gebi ahaan isaga baxeen xili habeenimo ah (Jimce Sep 28-2012) iyagoo u jihaystey dhanka waqooyi ee gobolka.